Ex Xildhibaan Kulalihi:- Kursiga Jaale Ugaar NO musuq-maasuq!!! – Puntland Post
Posted on January 29, 2017 by Faarax
Ex Xildhibaan Kulalihi:- Kursiga Jaale Ugaar NO musuq-maasuq!!!
Kulalihi oo boor-weyn la maraaya Bartamaha Garowe
Xildhibaan Maxamuud Axmed oo looyaqaan “Kulalihi” wuxuu kamid ahaa xildhibaanadii ugu firfircoonaa Baarlamaankii hore ee Dawlada Federaalka ee Soomaaliya ee dhawaan xilalkoodii wareejiyey, hase ahaate xildhibaankan ayaa gashaanka u daruuray qaabka loo doortay kursigiisii hore ama kursiga ay Beeshiisu ku leedahay Dawlada Federaalka oo kamida ahaa xildhibaanadii lagu doortay magaalada Garowe.
Kaamirada Puntland Post ayaa qabatay arin u eg mudaharaad uu kaligiis maalmahan ka waday bartmaha Garowe xildhibaan kulalihi taas oo uu kaga cabanaayo qaabka loo doortay kursigii xildhibaan ee uu u tartamay oo weli muran xoogani ka taagan yahay.
Kulalihi ayaa bartamaha caasimada Puntland ee Garowe kula wareegay boor-weyn oo uu ku qoran yahay “Kursiga Jaale Ugaar NO musuq-maasuq” taas oo ula jeeddo inaan si cadaalada loo dooran kursiga ay beeshiisu ku leedahay Baarlamaanka Dawlada dhexe ee Soomaaliya, sidoo kale wuxuu goobaha lagu qaxweeyo ku qaybinaayey warqado ay isla erayadaas ku qoran yihiin.
Hadalada uu adeegsanaayey waxaa kamida ahaa ” Dhaq-dhaqaaqa isbadel doonka Soomaaliyeed”
Dadka aqoonta u leh Maxamuud Axmed Kulalihi waxay ku sifeeyaan shaqsi ka dhawrsoon isdaba-marinta aana la gaban wax uu aamisan yahay, sidoo kale kale waa sharci yaqaan ku hadla illaa 6 luuqadood.
Hoolkii doorashada ayuu ka sheegay in la musuq-maasuqay kursiga uu u tartamay, wuxuuna eedayn kulul dusha uga tuuray gudigii heer Puntland ee maamulaayey Doorashadaas iyo masuuliyiin kale oo uu sheegay inay ku lug lahaayeen musuq-maasuqa.
Daawo Kulalihi oo ka hadlaaya qaabka ay u dhacday Doorashadiisii
One comment on “Ex Xildhibaan Kulalihi:- Kursiga Jaale Ugaar NO musuq-maasuq!!!”
Mr awbarakaale says:
Ex xildhibaan kulalihi kursigaa 16 sano ayuu ku fadhiyey kursiga beesh oo ka dhashay runtii kulalihi si fiican baa loga guulaystay oo waxaa laga guulaystay 33 cod sidaan maqlay markaa kulullhi xaq uma lahaa inuu maantaa kursigii oo hayey 16 sano inuu ku dacwoodo oo maanta uu ceeb kala tagey beeshiisi inuu boor cidla ka wareego garoowe waa meel ka dhac kulilahi wuxuu samaynayow waana laga fiican yahay inuu boor qaatow maantaa